ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: November 2008
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေ အနည်းနှင့်အများရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှု့တွေကို မဖြေလျော့တတ်ရင် စိတ်ကျန်းမာရေးရော၊ ရုပ်ကျန်းမာရေးပါထိခိုက်နိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေလဲ လျော့ကျသွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမထိခိုက်အောင်၊ စိတ်သက်သာအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်မဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို သိတဲ့သူတွေလဲရှိနိုင်သလို၊ မသိတဲ့သူတွေလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေပြန်ဖတ်ဖြစ်လို့ စိတ်အနည်းငယ်သက်သာအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်မကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို သင့်သလိုဘာသာပြန်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပါရစေရှင်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ ……
ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ဟာ ရေအနည်းငယ်ထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်လေးကို ကိုင်ပြီး သူ့အတန်းကို စတင်ဖို့ဝင်လာပါတယ် .... နောက်တော့သူဟာ ကျောင်းသားတွေအားလုံးမြင်သာလောက်အောင် ဖန်ခွက်လေးကို ကိုင်မြှောက်ပြီး
“ ဒီဖန်ခွက်ဘယ်လောက်လေးမယ်ထင်သလဲ” လို့ကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်ပါတယ်။
“၅၀ ဂရမ်” “၁၀၀ ဂရမ်” “၁၂၅ ဂရမ်” စသဖြင့်ကျောင်းသားတွေက ဖြေဆိုကြပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ပရော်ဖက်ဆာက “ဆရာချိန်မကြည့်ပဲနဲ့ ဒီဖန်ခွက်ဘယ်လောက်လေးသလဲ အတိအကျမသိပါဘူး” တဲ့
“ဒါပေမယ့် ဒီဖန်ခွက်လေးကို ဒီလိုကိုင်မြှောက်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်နေရင် ဘာဖြစ်မလဲလို့ မေးချင်တာပါ” လို့ဆိုသတဲ့။
ဒီတော့ ကျောင်းသားတွေက “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” လို့ပြန်ဖြေကြပါတယ်။
ပရောဖက်ဆာက “ကောင်းပါပြီ ဒီလိုဆိုရင် တစ်နာရီလောက်ကြာအောင် ဒီလိုဆက်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ရော” လို့မေးပြန်သတဲ့။
ဒီတခါမှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က “ဆရာ့ လက်မောင်းတွေညောင်းလာမှာပေါ့” လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။
“တပည့်ပြောတာမှန်ပါတယ် ။ တကယ်လို့ ဒီဖန်ခွက်ကို တနေကုန်သာ ကိုင်မြှောက်ထားမယ်ဆိုရင်ရော” လို့ထပ်မေးပြန်ရော …
ဒီတခါမှာလည်းကျောင်းသားတစ်ယောက်က “ဆရာ့လက်မောင်းကြောတွေဆိုင်းလာသလိုဖြစ်လာမယ်၊ ကြွက်သားတွေလဲနာလာမယ်၊ လေတောင်ဖြတ်သလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ် …ဆေးရုံတော့သွားရမှာသေချာသလောက်ပဲ” လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါပရော်ဖက်ဆာက “မင်းဖြေတာ သိပ်ကောင်းတဲ့အဖြေပါ။ ဆရာတို့ ဒီလိုတနေကုန်ဖန်ခွက်ကိုကိုင်မြှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဖန်ခွက်ရဲ့အလေးချိန်ကပြောင်းလဲသွားသလား” လို့ထပ်မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ကျောင်းသားအားလုံးက “ပြောင်းလဲမသွားပါဘူး” လို့ဖြေလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီတော့ ပရော်ဖက်ဆာက “ ဒါဆို ဘာလို့ လက်မောင်းတွေအောင့်လာပြီး ကြွက်သားတွေနာလာရသလဲ” တဲ့ ….
ပြီးတော့ ထပ်မေးပြန်ပါတယ် “ဒီနာကျင်မှု့က လွတ်မြောက်အောင် ငါတို့တွေဘာလုပ်သင့်သလဲ” တဲ့။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က “ဖန်ခွက်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါ” တဲ့။
ဒီအခါ ပရော်ဖက်ဆာက “အတိအကျပါပဲ” လို့ပြောပြီးဆက်ပြောပါတယ်။
“ဘ၀ရဲ့ ပြဿနာတွေဒီလိုပါပဲ။ မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းထဲခဏလေးသာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် သိပ်ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ခပ်ကြာကြာလေးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ စပြီးတော့ နာကျင်လာပါပြီ။ ဒီထက်ပိုပြီး ကြာကြာလေး ဆက်တွေးတော့မယ်ဆိုရင် လေဖြတ်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ဘာဆို ဘာမှထပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။”
“မင်းတို့ဘ၀မှာအရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ စိန်ခေါ်မှု့တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့တွေနေ့တိုင်း မအိပ်ခင်အချိန်ရောက်ရင် အားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်”
“ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် မင်းတို့ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေသက်သာမယ်။”
“မနက်မိုးလင်းလို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့အချိန်မှာ ကြည်လင်၊ လန်းဆန်းနေမယ်။ နောက်ထပ်ကြုံလာမယ့် စိန်ခေါ်မှု့အသစ်တွေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်” တဲ့။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေ့အလုပ်ကပြန်ချိန်ရောက်လာခဲ့ရင် ဖန်ခွက်လေးကို လွှတ်ချဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော် ။
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:15 PM2comments Links to this post
ဂစ်တာတစ်လက်ကို ငါ အပြင်းအထန်ရှာခဲ့တယ် ….
ဟော …. ဟိုမှာ
ငါ …. ၀မ်းသာအားရ ပြေးသွားပြီး
ဖြက်ကနဲ သတိရလိုက်တယ် …..
ဘယ်တုန်းကမှ ဂစ်တာ မတီးတတ်ခဲ့ပါလား …
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:40 AM6comments Links to this post
ခဏ ခဏ သိခဲ့ရက်နဲ့
မျှော်လင့်ခဲ့မိတာ ငါ့အပြစ်ပဲပေါ့ ….
ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ရယ်လို့ ဖမ်းဆုပ်ခဲ့မိတယ် …
ငါ့ဆုတောင်းတွေ မပြည့်ခဲ့ဘူးကွာ …..
တစစ မှုန်ဝါးရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့
သူ့နေရာနဲ့သူ အသားကျသွားမှာပါ …..
ခုန်လှုပ်နေတဲ့ ငါ့နှလုံးသားတစ်စုံကလွဲလို့ပေါ့ ……
ငါဆိုတဲ့ ငါ သိပ်အေးချမ်းခဲ့တာပါ …
ငါ မသိခင်ကတည်းက မင်းကငါ့ရင်ထဲရောက်နေပြီလေ…..
သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ မပိုင်ဖူးတဲ့ အရာတစ်ခုကို
လက်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့ရယ် …..
မင်းကို မပေးလိုက်ရတဲ့ အချစ်တွေရယ်ကလွဲရင်
ငါ့ဆီမှာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူးကွာ …..
ဗလာဖြစ်နေတဲ့ ငါ့ရင်ထဲမှာ …
ငါ့ရင်ထဲကို ငါတော့မြင်နေရတယ် …
ငါ မျက်ရည်မကျဘဲ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေမိတာ
မင်းနှလုံးသားလေး အအေးပတ်မှာစိုးလို့ပါ …..
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:22 AM4comments Links to this post
ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဖော်ဝဒ်မေးလ်လေးကဆင့် ရခဲ့တာပါ … ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးတင်ပါတယ် ..
အောက်ကပုံတွေကတော့ ရေတံခွန်ထိပ်မှာရှိနေတဲ့ 'The devil's swimming pool' လို့ခေါ်တဲ့ရေကူးကန်ရဲ့ပုံလေးတွေပါ … ဒီရေတံခွန်က ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ရေတံခွန်ရယ်လို့ ၀ီကီမှာဆိုထားပါတယ် … တောင်အာဖရိကရဲ့ Zambia နဲ့ Zimbabwe နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ ရှိတဲ့ Zambezi မြစ်ပေါ်မှာတည်ရှိတာပါ …. အကျယ်က ၁.၇ ကီလိုမီတာ (၁ မိုင်) နဲ့ အမြင့်ကတော့ ၁၀၈ မီတာ(၃၆၀ ပေ) ရှိပါတယ် … အသေးစိပ် သိချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ်လေးကို သွားနိုင်ပါတယ် …
ဒီရေကူးကန်က အစွန်းရောက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေပါသတဲ့ ...
ကျွန်မကတော့ ပုံတွေမြင်ယုံနဲ့တင် ကြက်သီးတွေထပြီး ခြေဖ၀ါးတွေယားလာပါတယ် ...
သူငယ်ချင်းတို့ရော သွားကူးချင်ကြပါသလား ?
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:19 PM 1 comments Links to this post
ဒီကဗျာလေးက ပျင်းစရာကောင်းလွန်းတဲ့ Seminor တစ်ခုမှာ အိပ်ငိုက်လွန်းလို့ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးပါ ….
ခပ်ခြောက်ခြောက် Seminor မှာ
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:18 PM0comments Links to this post
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:40 PM 1 comments Links to this post
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:40 PM0comments Links to this post
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:39 PM0comments Links to this post
“နင့်ကိုမချစ်၊ နင်ကျန်ရစ်” လို့
ဘာညာ ဘာညာ ပြောလိုက်တာနဲ့
စိတ်ကမပါ ကံစမ်းတာ …….
ဒီကဗျာလေးကို ခေါင်းစဉ်လဲ မမှတ်မိတော့သလို၊ ရေးသူအမည်လဲ မမှတ်မိတော့ပါဘူး …
မှတ်မိတာတစ်ခုကတော့ ဒီကဗျာလေးက ၁၉၉၆ လောက်က YIT ကျောင်းသားတွေ စုထုတ်တဲ့ကဗျာစာအုပ်လေးထဲကပါ …. ဖတ်ပြီးတော့ အမြင်ကပ်မိပေမယ့် ဘာကြောင့် အလွတ်ရနေမှန်းမသိဘူး …. ခုချိန်မှာတော့ ဖတ်ကြည့်ရတာ တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 6:27 PM0comments Links to this post